Gbasara Anyị - LANGFANG OLAN GlasAS BeadsS CO., LTD
Tọrọ ntọala na 2010, LANGFANG OLAN GlasAS BEADS CO., LTD bụ ọkachamara na-emepụta iko chaads na China, yana teknụzụ imepụta nke ọma, ụlọ ọrụ ahụ ahụla afọ na afọ na-eto eto na azụmaahịa ọ na-aga nke ọma taa. Anyị nwere ike ịmepụta iko iko dị iche iche maka nchekwa okporo ụzọ na ebumnuche ụlọ ọrụ. A raara ụlọ ọrụ ahụ nye ụlọ ọrụ nchekwa okporo ụzọ yana ozi nke ọkachamara n'okporo ụzọ nchekwa.
Ebe E Si Nweta Nke Mbụ
Ọnụahịa ezi uche dị na ya
Anyị isi ngwaahịa ndị na-egbuke egbuke iko chaplet maka n'okporo ụzọ marking, sandblasting iko chaplet, oghere iko microspheres, egweri iko chaplet, elu index iko beads na agba iko chaplet. Igwe bekee na-atụgharị uche maka akara n'okporo ụzọ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu, na-eji ihe kachasị mma na akara, anyị na-enye ogologo ndụ, nchekwa na visibiliti n'afọ niile, yana iko iko na-agbanye n'ime ihe anyị iji na-enwu gbaa n'abalị.
Na ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ nke na-amị ma na-ebupụ, anyị na ngwaahịa meriwo aha ọma na mba ahịa maka elu àgwà na asọmpi price. Anyị n'ichepụta na-nọgidere na-enwe, mma na ike ụba izute amụba choro maka anyị ngwaahịa. Mmejuputa atumatu nke usoro ihe eji eme ihe na-aga n’ihu na-akwado anyi iji nweta ISO 9001: 2015 Asambodo.
Na ndabere nke technology development, ụlọ ọrụ ga-edebe oké anya na isi management, anụ àgwà, nọgidere rụọ pre-ire ọrụ, ahịa na mgbe-ire ọrụ, na ime ahịa asọmpi nke ngwaahịa anyị. Kemgbe ntọala ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka nkwenye ahụ "buru ụzọ buru ụzọ, ndị ahịa gbadoro ụkwụ, mma kacha mma na ọnụ ahịa ezi uche". Anyị na-ele anya ịnụ n'ọnụ gị na onyinye bara uru anyị na mmepe anyị n'ọdịnihu. Anyị ga-enye ọkaibe ahịa ọrụ na omume. Daalụ maka azụmahịa na nkwado gị! Langfang Olan Glass Beads Co., Ltd ga-abụ onye nchekwa gị mgbe niile n'ụzọ.